ဘာနဲ့ ကန်တော့ ပြီးပြီတုန်းးးး
၁၀% လောက်တော့ ရှယ်ပေးပါ။
ကျောက်ခဲတောင် နှင်းနဲ့ တွေ့ အရည်ပျော်ရသေးတာ။
ကျောက်စ် သနားလည်းသနား၊ အမြင်လည်းမတော်…
အိပ်ရေးပျက်၊ နားပူခံရတဲ့ဒဏ် မခံနိုင်လို့…
နည်းပေးလမ်းပြ လှော်ပေးလိုက်တာပါ မိဇာဂျီးရယ်…
အဲ… ဝါသနာရှိရင်းစွဲကလေးကလည်း ဖျောက်မရနိုင်လို့…
အုအုကျောက်ရွာသူဘယ်သူလဲဟင်။ အုအုကျောက်လက်ရာကိုး အဒူလဲဟင်။
မွေ့နှင်းကေသရာ ကျောက်တဲ့ သူရဲကောင်းပါ ဆို
ဒီကွန်​မန်​့ကို​ရေးချင်​လွနိးလို့ ညကမအိပ်​ဘဲ ကြိုးစားြပြီးရွာထဲလာခဲ့တာဗျို့
အထက်​ပါဇတ်​လမ်​းဖြစ်​​မြောက်​​ရေးအတွက်​ အဖက်​ဖက်​မှ ဝိုင်​းဝန်​းကူညီ​ပေးကြကုန်​​သော ….
အချစ်​မဟာဗျူဟာ ​လေ့လာ​ရေးအဖွဲ့ှမှ တပ်​မှူးကြီး ဘိုဂျုပ်​​ကျောက်​စ်​ ၊ ပဲ​လှော် သမား​မောင်​ဆာမိ ၊ ​ဘေးတီး ပတ်​မကြီးထု မခိုင်​ဇာ ၊ အကြံ​ပေး ညဏ်​​ပေး ​ရွှေကြည်​ ၊ အတိုင်​ပင်​ခံ နန်​း​တော်​ရာသူ ….. ​ဘေးထိုင်​​မြှောက်​​ပေး အလင်​းဆက်​ နှင်​့ သဂျားရာထူးမှ​လျှောသွား​သော မြှားနတ်​​မောင်​ ဦးမာဃ တို့အား ……
အမည်​မ​ဖော်​လို​သော ကာယက ရှင်​များကိုယ်​စား ​ကျေးဇူးတင်​ရှိပါ​ကြောင်​းးးးးးးး
စိတ်​ဝင်​စားပါက ရွာထဲမှလူြပြိုကြီး များလည်​း အဆိုပါအဖွဲ့နှင်​့ ဆက်​သွယ်​ တိုင်​ပင်​နိုင်​ပါ​ကြောင်​းးးး
အခ​ကြေ​ငွေမယူပဲ အိမ်​တိုင်​ယာ​ရောက်​ အကူအညီ​ပေးမည်​ဖြစ်​ပါ​ကြောင်​းးးးးး
ကဲ ကဲ … အတည်​​ပြောပါမယ်​
ရွာရဲ့ အကျိုး​တော်​​ဆောင်​ အချစ်​​တော်​ ရွာသား​လေးနဲ့ ရွာသူ​လေးကို လည်​း အထူးဝမ်​း​မြောက်​​ကြောင်​း​ပြောချင်​ပါတယ်​
သကြီးမင်​းနဲ့ တကွ ရွာလူကြီးများ ၊ ရွာသူရွာသားများအ​နေနဲ့လည်​း
ဦး​ကျောက်​ရဲ့ ဆန္ဒ အရ ရွာကိုအပ်​ပြီမို့ ……
ဝို်​င်​းဝန်​း​ဖေးမ လက်​တွဲ ​ခေါ်ကြပါစို့ ​နော ……
ထုရတာ လက်အံသေလို့ …….
စိတ်ညစ်ရင် ကိုယ့်ကို လာလာညည်းပြီး…..
ဝမ်းသာစရာသီတင်းကျမှ ကိုယ့်ကို မပြောရကောင်းလား စိတ်ကောက်မိသေးးးးး
ဟိုနေ့ကမှ ၂ ယောက်တွဲ ဓာတ်ပုံလေး လာပြပြီး ပြန်ချော့လို့ စိတ်ပြေရတာ။
နို့မို့ ၂ ယောက်လုံးကို ထပ်ထုချင်တာ။
ဘုရားသခင် ပိုလို့ ကောင်းချီးပေးပါဇီတော်..
နိ ရော ဘယ်တော့ ၂ ယောက်တွဲပုံ ပြမတုန်းးးးး
နိုဝင်ဘာ ၁၁-၁၂ ရန်ကုန်မှာ အဲ့ ကရင်မလေးနဲ့ တူတူ ရှိနေမယ်…
အူးလေးကျောက် လက်မှတ်ထိုးတဲ့ရက် နဲ့ တရက်ကပ်လွဲသွားတာစိတ်မကောင်း…
ဒါ့ပုံ အဲ့ကျမှ ကြည့်တော့ …
လှည်းတန်းက ဟိုသေချင်းဇိမ်း ဒါ့သေဆြာ ကိုရိုက်ခိုင်းအူးမှာ …
ဟီ ဟိ ကိုရင်ဆာက ကျောက်စ်ထက် ပိုဒုက္ခခံရတော့ ပိုသိမှာပေါ့…
အခုတော့ သူတို့ပျော်နေတာကြည့်ပြီး ပီတိဖြစ်ရပါကြောင်း…
ဟိ… မိဇာဂျီးတို့ ဒီတစ်ကွက်လွတ်သွားတယ်…
ဟိုသူငယ်မက ငိုခြင်လို့ လက်တို့ပေးပါဆိုတာကို…
ဝုတ်ပါ့ မောင်ဂီရယ် ၁ရက်ထဲ ကပ်လွဲသွားတယ်
ဂါးနဲ့ ဂီ ခုမှ တွေ့တာ ပါဆိုမှ…
ကဲ ကဲ ဂါးနဲ့ ဂီ လည်း အောင်ကြပါစေ လို့…
မျက်နှာများတဲ့ သူနဲ့ သူ့ကောင်မလေး တို့အကြောင်းလား…
ကိုရင်ဆာရဲ့ ကွန်မန့်အတိုင်း ခင်ဗျ
အစက​တော့ … ဒီတိုက်​ပွဲမှာ ​မောင်​ဆာမိက ​လေ​ကြောင်​းပစ်​ကူပါခင်​ဗျ
သို့​သော်​ ဗျူဟာမ​ကောင်​း​လေ​တော့ ပစ်​တိုင်​းလွဲ​နေတာ
ဒါနဲ့ ဗျူဟာမှူး ​ကျောက်​စ်​ က ဗျူဟာဆွြဲပြီး တိုက်​​တော့မှပဲ အလံထူနိုင်​တာဗျို့
စစ်​ဆင်​​ရေးနာမည်​က တစ်​ကွက်​​ကျော်​ စစ်​ဆင်​​ရေး တဲ့ ခင်​ဗျ
ဟီ ဟိ အပွဲပွဲနွှဲလာတာ ဘယ်ရမလဲ…
နောက်ဆုံးတော့ အဖြေရပါလေရော… ဝမ်းသာတယ် ဟီး ဟီး
အနော့်ဂိုလည်း ခရစ်စတယ်လှိုင်းလေးနဲ့ အောင်သွယ်ပေးပါ.. ဟိုကောင် ငစည် ပျံမရောက်ခင်.. ဒင်းဂအလွယ်ဗူး စာနေဂျ ကြောင်ဖားဂျီး…။ ဦးကျောက် ခရစ်လေးကို ကြည့်ချင်သလောက်ကြည့်၊ တွေးချင်သလောက်တွေး၊ ပြစ်မှားဂျင်သလောက်ပြစ်မှား.. ကိုယ်ထိလက်ရောက် မကျူးလွန်ရင်ပီးရော….
ကစီသွပ်က စက်သေနပ်နဲ့လည်းပစ်၊ ဗုံးလည်း ကျဲမှာတဲ့…
အဲသည်တော့ သေချာခြင်ရင် ကျောက်စ်တို့ မင်္ဂလာပွဲကိုတက်…
သတို့သားအရံလုပ်ပေး၊ ခရစ်လေးကို ပြောပေးမယ် ဟီ ဟိ…
သံချေးရေသောက်ပီး သံပြားအောင်းထွက်လာဒါ… ဟီးးး သံလိုမာကျောနေပီ..
စိတ်ဓါတ်ပြောဒါပါ… ရွာထဲက ဗျူဟာမှူးတွေ သားအပေါ်ဆို
သိပ်ဥပေက္ခာပြုနိုင်ဒါပဲ… ကူမင်တန်လို့ တရစပ်တိုက်စစ်ဆင်တာတောင်
ခရစ်လေးရဲ့ အဖျားနားတောင် သီခွင့်မရခဲ့ဖူးးး။ အူးကျောက်… ကျော့်က
အရင် အဲ့နေရာဂို ယူထားတာနော်.. ဘိုကင်ဒွေမကျော်နဲ့…အူးကျောက်စားမယ့် စွန်ပလွန်သီးထဲ…
ဆေးခပ်ပြီး မောင်ဖြိုးတို့ အဖွဲ့လွှတ်ပေးလိုက်မှာ….
အဲလို မရက်စက်နဲ့လေ ကိုရင်စည်ရဲ့…
ဒီလိုလုပ် မောင်ရင်တို့ ၂ယောက် လည်ပင်းကြိုးချည်ပြီး ပြိုင်ဆွဲ
နိုင်တဲ့သူ အဲ့နေရာဂို ယူ… ဟီ ဟိ
like 60 တဲ့
သူတို့ကို ရွာထဲက တကယ်​ချစ်​ကြတာပဲ
ဟီ ဟိ အဲဒါကြီးက တခုခုတော့ မှားနေပြီထင်ရဲ့…
အချစ်မြှားနတ်မောင်ဂျီး အူးကျောက်စ် ကိုလေးဇားဘာဒယ်ဗျာ..
ရွာသူရွာသား တိုးပွါးစည်ပင်စေဖို့ပါ… ဟီ ဟိ
တိုင်းပြည်မှာ လူပိုကြီး အပိုကြီး လျော့ပါးစေရေး… ကျောက်စ် အရေး… အားဟိ
ဦးကျောက် လို လူမျိုးနဲ ့ကျောင်းတုန်း က မတွေ ့ခဲ့တာ နာသဗျာ…
ကျနော်က ဟိုလူကြီးထပ်ပိုပြီး အုံ ့ပုံးသဗျ…..
ဦးကျောက် တောင်လက်လျော့ပြီး မျက်နှာပျက်ရမလားပဲ…..
ဘာပဲပြောပြော အဆဲမခံ ရမှာသေချာတယ်…
ဒါနဲ ့….ဟိုတယောက်အတွက်လည်း Congrat: ပါ…..
ဟီ ဟိ ကျောက်စ်က အခုမှမနဲထိန်းထားရတာ… မျက်နှာပြောင်တယ်
ခင်ဗျား အုံ ့ပုန်းမို့မပြောရဲရင် နောက်ကလိုက်ခဲ့…
အိမ်ထောင်မကျခင် ကျောက်စ် အာပေးမယ်… ဟီဟိ
ကျောင်းတုန်းကကျနော်ကို လှော်ခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေများ ညံ့ချက်ဗျာ…..
ခုတော့သူတို ့ခမျာ…သားသမီး နှစ်ယောက် သုံးယောက် တို ့လို ့တွဲလောင်းနဲ ့…ဟီဟိ
အူးလေးတို့ အဖွဲ့ကို အားကိုးပါရစေ
သများလည်း ရွာထဲက လိင်တူချစ်သူ တယောက်ကို စိတ်ဝင်စားနေပါတယ်
ဖြစ်နိူင်ရင် အမြန်နီးစပ်ဖို့ ကြိုးစားပေးဘာ
သားရယ်… သူတို့က မဆွတ်ခင်က ညွှတ်ခြင်နေတာ…
အဲလို လိုင်းတူကြံနည်း နိသသျှီးက…သူတို့ပဲကျွမ်းတာလေ…
ဘာတဲ့ Straight ဖြိုနည်းတဲ့ ဟီဟိ …
အဟမ်း… အခုတစ်လော တုံး တွေ
နာလည်း တုံးဗုံဗုံ ဆိုပြီး နာမည်ပြောင်းအုံးမှ…
သူတို့အလှည့် ပြီးရင် တမီးအလှည့်
အူးကျောက် ညက်နာ မလိုက်နဲ့…ရီးဇားစာရေးပေးအုံး..
ပြီးတော့ တစ်လက်စတည်း ပေးပေးနော်..
မိဗုံက ပေးခိုင်းတယ်လို့ ပေါလိုက်.. ဒါဗြဲ..
ဦးကျောက် ယောက်ျားချင်း ရည်းစားစာလိုက်ပေးတယ်ဆိုပြီး နာမည်ကြီးနေမှ…
မိန်းထဲ မှ ကျောင်းတက်စဉ်က ထုံထုံ အအ နဲ့မို့ ဘာဇတ်လမ်းမှ မရှိလိုက်ရပါဘူးဗျာ ..
Nyo Win ပြောသလို ကျောင်းပြီးတော့မှ ဘေးတီးကောင်းမှုနဲ့ ခုတော့
ခေး တွေတောင် လူလားမြောက်ခဲ့ပါပြီ ….။
(ဘေးသာ မတီးခဲ့ရင် ကျုပ်လဲ လူပျိုကြီး အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်နေမှာ)
ဦးဂျစ်ရေ…..ကျော်ကတော့ ခုထိ လူပျိုကြီး အဖွဲ ့ဝင် ပဲခင်ဗျ…ဟီဟိ
ကျောက်စ်လည်း ကျောင်းတုန်းက ကိုယ်သာ ရူပါမပွင့်လို့ လိုက်မကြံပေမည့်၊
သူများကိုဘေးတီး ချွန်တွန်းကတော့ ဝါသနာကြီးပါ၏… ဟီ ဟိ
ဦးဂျစ်လည်း အိမ်ထောင်စောစောကျ၊ ကိုရင်ညိုလည်း ခလေးအဖေ ဖြစ်နေပြီ…
ဒီကိစ္စ နာထင်တယ်… နာထင်တယ် နာတောင်တွေ့လိုက်သေးဒယ်
အာပျိုယီး က အာပျိုယီးလိုနေဘာဗျာ …
ဒါ ညီးတို့ နားမလည်တဲ့ ဘာသာရပ်တခု ရယ်..
ထင်မနေနဲ့တော့လေ၊ အခု တရားဝင် ကြေငြာလိုက်ပြီ…
ဒေါ်ဝေါင်း အလုပ်အပ်ချင်ပါသလား… ဟီး ဟီး
နာလို ဂဂျီဂဂျောင်၊ လက်ပေါက်ကပ်၊ အစားပုတ်၊ အတင်းပြော၊ အကျင့်ကလေးလဲမကောင်းတဲ့ အပျိုကြီး အလုပ်အပ်ရင် ကျောက်စ် နာမယ်ပျက်မယ်…
အန်ကယ်ရမ်ဒီရယ်…. တမီးလည်းပိန်းတယ်.. မင်းသားကိုသိပေမယ့် မင်းသမီးကိုတော့ သိပ်မသေချာလို့.. ဘာပဲပြောပြောအရမ်းဝမ်းသာပါတယ်.. သေချာတာတော့ မင်းသမီးလေးကလည်း ထက်မြက်ပြီး စာရေးကောင်း သူလေးဖြစ်မယ်ဆိုတာပါပဲ..
ဒီရွာထဲမှာ ရေးသူ ဖတ်သူ အချဉ်တစ်ယောက်မှ မပါဘူးလေ…
ရွာသူလေးကတော့… အဟမ်း အတိတ်စိမ်းပေးရမလား…
ခရစ်စတယ်လှိုင်း သတို့သမီးအရံလုပ်ပေးဖို့ ပူဆာထားသူများရှိပါကြောင်း…
ပိန်းဒဲ့ ခရစ်စတယ်လေးဂို ဂျိမ်းဂျင်ဒယ်…
မင်းတားမောင်ဂီဂ မင်းတာမီးလေး စာရေးကောင်း ထက်မြက်တာ အသိဗူး.. အဓိက ဂ အဓိက ဒဲ့..။ ဟိုဒင်း ဟိုဟာ ဟိုဥစ္စာမှာ အဓိကနဲ့ သာမည ခွဲတတ်ဖို့ လိုသကွဲ့။။။ ဦးကြောင်ကြီးဆို အကြီးဆုံး အရှည်ဆုံး အတုတ်ဆုံး အကြာဆုံး အကောင်းဆုံး အခြစ်ဆုံးဗဲ… ဆိတ်ကူးမလွဲနဲ့…
အဲဒီအရွတ်ထန ကြောင်ကူလီကြီး ချီးတွင်းထဲကျသေပါစေဟယ်..
ချီးတွင်းထဲမှာ ခြစ်ကြမယ်… နှာခေါင်းအပိတ်ကြေး… စိန်လား.. ဂရား…
ဦးဒေါ် .. ဦးဒေါ် .. ဦးဒေါ် …
( ဖင်ဘူးတောင်း ထောင်ပြီး ဦးဒေါ် လုပ်နေတီဟု မြင်ယောင်ဘာရန် … )
ကျိုပီး ကန်ဒေါ့ထားဒါနော် … ဥငေးးး …
ကိုင်းး အူးချပီးဘီ ဆိုဒေါ့ .. ကျုပ်ကိုလည်း အစွံထုတ်ပေးအုံးဂျ … ခွိခွိ
အခု ဥငေး အစွမ်းနဲ့ အဆင်ပြေတွားဒဲ့ ရွာသူား အတွက်လည်း
ကျုပ်က ကွန်ကရက်ကျူလေးချင်း ပါဂျောင်းးးး
ရိုးမြေကျသည့်တိုင် ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲ ရွှေလက်တွဲသွား နိုင်ပါစေဂျောင်းးးး
ဦးဆာမိ အဖွဲ့နှင့်လည်း အညန်ဆုံး ဆက်သွယ်လိုဘာဂျောင်းးး
:confused: အာ့မင်းသားဟုတ်ဖူးလားဟင် …
အခုကြတော့ ရုပ်ကြီးကို ဖြီးလို့… မျက်စေ့နောက်အောင် လာမလုပ်နဲ့
တင်းလာရင်… ပြန်ရှော်လိုက်မှာနော်… ဟီ ဟိ
တင်းလိုက်ဒေါ် မမူဘာနဲ့ ခီညော် …
ညက်နှာ လာပြောင်ဒါ မီဟုတ်ဘာဝူး …
ဂျစ်လို့ စဒါဘာ .. ဟီးးဟီးးး
ဟမ်မယေး ဒေါ်သဲရယ် သေခြာတာပေါ့ လက်ဆွဲပြီးပြဖို့ပဲ ကျန်တော့တယ်…
တိုက်ခန်း ၁ခန်းလောက် လက်ဖွဲ့ပါလားတဲ့… ဟီဟိ
ဘက်ထရီကား ရှာလိုက်အုံးမယ်။ :loll:
အရမ်းတော်တဲ့ အူးလေးပါလားကွီ.. ဒီအူးလေးကို တူမတော်ရတာ ကံကောင်းလိုက်တာ..
သာမီးကိုလည်း မိုးယံဇွန်နဲ့ အောင်သွယ်ပေးပါလားဟင်င်..
ဟို အူးလေးဂီ က မိုးယံဇွန် နဲ့ သိတယ်တဲ့.. သာမီးကို ဗျူဟာထုတ်ပေးမားဟင်င်..
အဟမ်း… ရုပ်တည်ကြီးနဲ့ ပေါ့လေ…
တင်းလာပြီနော်… ဟင်း ဟင်း
အောင်မယ့် တူဂလဲဝင်နောက်တေးဒဂိုး။ နာလဲထုမှတိဒယ်။ ဟီဟိ ဝမ်းသာပါအိ။
အဟမ်း… အဟမ်း… ဒီမှာ သက်သေခံပစ္စည်းနဲ့တဂွ ခြေရာလက်ရာမပျက်ခင် မိထားတာနော်….
မယ်ဂီ့ကတော့ ဟိုနေ့ကပြောတွားသား ဒီနှစ်ထဲ သုံးတွဲလက်ဖွဲ့ရမယ်ဆိုလား။
ပျက်ဂဒိန်တွေကိုဆွဲဗျဲပီး ဂုဘဲ မင်္ဂလာဆောင်ဒဲ့ရက်ဖြစ်ဘလိုက်ခြင်ဘီနော
ကျုပ်ခြာတိတ်တုန်းက ဘော်ဒါတစ်ယောက် လယ်တောထဲကို မိန်းမခိုးလာတာ
တဲအောက်မှာ နွားခြူတွေ ခလောက်တွေဆွဲထားပေးပြီး
ညလိုကြတော့ ဟိုကောင်ခလောက်တွေခြူတွေ ထဖြုတ်ပြီးဆဲပါလေရော
ခုတော့ သူတို့သားလေးတွေသမီးလေးတွေတောင် လူကောင်ကြီးတွေဖြစ်ကုန်ပြီ
ပျက်ဂဒိန်တွေကိုဆွဲဗျဲပီး ဂုဘဲ မင်္ဂလာဆောင်ဒဲ့ရက်ဖြစ်ဘလိုက်ခြင်ဘီ
ခင်ဗျားအလှည့်ဆို ခြူတွေ ခလောက်တွေ မဆွဲပါဘူး…
Vibration Alarm တွေပဲ တတ်ထားမှာ… ဟီ ဟိ
ကဲ ဒီတစ်​ခါ​တော့ ရွာလူကြီး​တွေအလုပ်​ရြပြီ
ဥက္ကဌ ​အ​ဟောင်​းအသစ်​များတန်​းစီ …..
​ရှေ့​လျောက်​ !! အ​ရောက်​ပို့
ကျောက်စ်နဲ့ ကိုဆာမိကတော့၊ အရောက်ပို့လိုက်ပြီ…
ကျန်တာတော့… ရွာ့လူကြီးများအတွက် ဟီ ဟိ
မွန်ကစ်တော့ မကောင်းလှတဲ့ ကွန်နက်ရှင်ကြောင့် ခေတ်တွေ နောက်ကျ ကျန်ခဲ့ဘီနဲ့ တူတယ်နော်…
ဒီမှာ မျက်စိသူငယ် နားသူငယ်လေးနဲ့ ဦးကျောက်စ် ပို့စ်ကို ဖတ်နေရဒယ်…
ဖတ်ကောင်းချက်ကလဲ လွန်ရော.. နောက်ဆုံးမတော့ ဒီ ဂဇက် ရွာသူ ရွာသားတွေရဲ့ မေတ္တာဘွဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးဖစ်နေတာကိုးးးးးးးး..
ဒါလည်း ရွာထဲက မေတ္တာဘွဲ့ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်လေ…
ဟီ ဟိ မန့်တွေကိုသေချာဖတ်မိရင် ဘယ်ရွာသူနဲ့ ဘယ်ရွာသား ဆိုတာ…
လယ်ပြင်မှာ ဆင်သွားသလို ထင်းထင်းကြီး မြင်ရလိမ့်မယ်ကွဲ့…
အင်းးးးးးးးးးးး… ကွန်မန့်တွေ ဖတ်ကြည့်ရသလောက်တော့ ခြောက်မျက်နှာ ရှိတဲ့ မောင်အံတစ်ယောက်တော့ အတော့်ကို အပျော်လွန်နေဒါ တွေ့ရသတော့..
ကောင်မလေး ကိုတော့ မမှန်းတတ်သေးဘူး.. မှားတွားရင် စိတ်ဆိုးမှာ စိုးရို့…
ကော်မန့်တွေ အစအဆုံး တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ် မွန်ကစ်လေးးး
အပေါ်က မိဇာဂျီး ပြောတဲ့အတိုင်း…
ဒါဆို ဦးကျောက်က ငယ်ငယ် ကျောင်းသားဘဝထဲက အစွမ်းအစရှိကြောင်း ပြခဲ့တာပေါ့နော်။
ဦးကျောက်စ် ငယ်ငယ်ထဲက အတော် ပြောင်စပ်စပ်နေခဲ့ ဗရုပ်ကျခဲ့တာမို့…
အခုလူကြီးဖြစ်လာတော့ အတော်ထိန်းနေရတယ်၊ ဒါတောင်မှ မြင်တဲ့အတိုင်း…
အူးလေး ..ကျော် စန်းဒယားဆြာတီးတဲ့ ရင်ဘတ်အပွအပွ အကျင်္ီဝတ်ရင် လိုက်မှာလားဟင်င်င်င်င်
ခုကတည်းက ဝက်ဒင်ဂေါင်း တွေလိုက်ကြည့်ရင်း ရင်တွေ ခုန်နေတာ..
ဘယ်ဒတ်ဆြာ ရိုက်ခိုင်းရမဲ ဆိုတာတွေးရခက်ကြီးခည…
(မားသံ ကိုတော့ ကင်မလာသိမ်းရမယ်…ဒီလူဂျီးကမလွယ်ဘု..)
ကျောက်စ်မှာ အသားတော်ကစ္စနက ညိုမှောင်တာမို့
ကွကိုယ် အရောင်ချွတ် မရမှတော့
ဒင်းတို့ကိုပဲ အိုးမဲသုတ်တာ အေးမယ် ထင်ပါတယ်ဗျာ..
အနီရဲရဲ နဲ့ တရုတ်မကြိုက်သူကြီး ကိုမြင်ယောင်မိဒယ်..
ကျော်လည်း ဂေါ့သစ်ဆိုပီး အနီရဲရဲ ဝတ် လို့ ..ပီးမတ်ကေနဲ့ ပွဲထွက်လိုက်ရ..
ဒီတစ်ခါလည်း နဖူးစာ ရွာ ဘာကြောင့်လည် ဘဲလားကွယ်။
ဟီ ဟိ သဂျီးရဲ့ မန်းဂဇက်ရွာလည်း…
ဪ ကိုကျောက် ရွာဖူးစာ သူတို့တစ်တွဲတည်းဆို ပျင်းနေလို့ အဖော်အပေါင်းတွေ လိုက်ကာစုဆောင်းရေးမှုး လုပ်နေတာပေါ့လေ။
ကျုပ်တို့အတွက်ရော လုပ်ပေး ကူညီပေးလို့ရတာမျိုး မရှိဘူလားဗျ။ ရှိရင်ပြောဗျာ အလုပ်အပ်မယ် စရံအဖြစ် ပေးထားမယ်လေ ရတယ်မလား။
အခု ရွှေလက်တွဲရန်ရည်ရွယ်လို့ အစွံထုတ်သွားကြသော မောင်တို့ မယ်တို့ ကိုလည်း ခင်ခ က လက်ခုပ်ဩဘာပါဗျို့……လို့။
ဒီလို ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့လို့ ဒီလို စွံတာ ထင်တယ်။
အန်တီမာမား မန့်ဖူးတာ မှတ်မိလား
ကျောက်မြှုံးမှာ နှင်းမိတာပါ… ဟီ ဟိ…
သူတို့ ၂ယောက်ကို အပ်တယ်နော် အန်တီမာမား…
အခုဆိုရင် အာရှတိုက်မှာ အပျော်ဆုံး ဗမာယောက်ျား ၃ယောက် ဖြစ်လာပြီပေါ့ဗျာ…
သတ်ပုံဂိုဏ်း ယိုင်နဲ့အောင်လုပ်မှုတွေနဲ့ တရာစွဲမယ်။
မိဂီမ … ညည်းက ဘူနဲ့ရဲ???
အိုက် အဆင်ပြေသွားတဲ့ စုံတွဲကို သများမုန့်လိုက်ကျွေးမယ်လို့ ပျောပေးဘာ အူးလေး
အချိန်နဲ့နေ့ရက်ကို ဒီပို့စ်မှာကိုယ်တိုင် လာပြီး ကွန်ဖမ်းဂျဘာလို့…အဟိ
မှတ်ချက်။ ။ တွေ့ကျမယ်လေလို့ပျောပျောပီး မသိခြင်ထောင် ထောင်နေသူရီးအား နီးနီးလေးနဲ့ဝေး သီချင်းဆိုပျဘာမီ
ကျန်း… ကျောက်စ်တို့ကိုတော့ မကျွေးဘူး…
ဟီ ဟိ ဒီလောက် နီးနီးလေး လေလည်ရင်တောင် ကြားရမတတ်ကို…
ကြားကြလား ဟို ၂ယောက်…
မွန်ကစ် ဒီနေ့ အလုပ်လုပ်ဘူး.. တိရား…
ဆိုးဝါးတဲ့ ကွန်နက်ရှင်ကို အန်တုပီး ဒီပို့စ်ကို ဖွင့်လိုက် … ပြန်ဖွင့်လိုက်နဲ့ ဖတ်နေဒါ..
ပျော်လဲ ပျော်ချာကြီး.. ခုတော့ သများလဲ တိတွားဘီ…
မိဂီမ ရဲ့ ကောင်မလေးဘဲ မသိရသေးတာ…
ဒီစုံတွဲ တွေ အားလုံး အိုအောင် မင်းအောင် ပေါင်းကြပါဇီတော်…
အန်ကယ်ရမ်ဒီရေ… တမီးလည်းအသည်းကွဲနေတယ်..သွားစွဲလမ်းမိတာက Keith Urban ဖြစ်နေလို့.. တမီးကိုလည်း သူနဲ့တူတဲ့သူလေးရှာပေးပါ… ကျေးဇူးမေ့ပါဘူး :harr:
ဦးကြောင်ကြီးက Keith Urban နဲ့ နှာခေါင်းတူပြီး…
ကိုရင်စီသွပ်က နားရွက်တူသတဲ့… ကဲ ဘယ်သူ့ကိုရွေးမလဲပြော… ဟီး ဟီး
တာမီးလေးခရစ်ရယ်… ကရင်စီက Keith Urban ဆံပင်လောက်ရှိပီးး
ဟိုက အဖြူကောင်ဆိုတော့ အသားနီစပ်စပ်ဖြစ်နေတော့ အသားဖြူဝင်းတဲ့ဒီက
သူတင်ငါတင်ယှဉ်ရင်တောင် အဲ့ ကိတ်အာဘန်က ကိုရင့်ထက် အဖက်ဖက်က နိမ့်နေတယ်လို့တောင်
ဒီရုပ်ရည်ကို ယုံလို့ အူးကျောက်စ်တောင် သတိုးသားအရံလုပ်ပေးဖို့ခေါ်ထားတယ်လေ..
တာမီးလေး ခရစ်လည်းယုံရင် အသည်းကွဲကုပေးဒဲ့ ဆြာဝန် လုပ်ပီရစေနော်..။
ကျေးဇူးဆပ်ချာမလိုပါဘူး.. အဲ့ကွဲနေဒဲ့ အသည်းလေး ပေးလိုက်ဘာရားးး။
အရှေ့အလယ်ပိုင်းပင်လယ်ပြင်မှာ အချစ်တတ်ဆုံး သင်္ဘောသီးတစ်လုံး..
ဦးကြောင်ဂ အဲဒီကောင်နဲ့ အတူဝူး.. Keith Jungle နဲ့တူဒယ်လို့တော့ ပြောဂျဒယ်… ဘိုလဲ ခြစ်မှာရား… ဂွီး ဂရား။။ ခရစ်စတယ်လေးကို တောထဲဂ တာဇံဂျီးလို ခြစ်မယ်…။
ကျုပ်လဲ တုံး တယ်လို့ ဝန်ခံပါတယ်တော်။
နှေးတုံ့တုံ့ အဖွားကြီး တွေ ကိုချန်မထားကြပါနဲ့။
ကျုပ်က အဖြေကို ရမ်းတီးတတ်တယ်။
မင်းသမီး လေး ကို “ဘပု” လို့ ထင်နေတာမို့ မဟုတ်ရင် ပြောနော် ကကျောက်။
သူပုန်ယွဲ တော့ အသီးကွဲပြီ။
ဟီ ဟိ မထူးတော့ပါဘူးလေ…ဘယ်သူတွေရှိရမှာလဲ…
ညက်နှာလာပြောင်တဲ့ ရွာသားနဲ့ ရုပ်တည်ကြီးနဲ့ရွာသူလေးပေါ့…
ဘာပဲပြောပြော နောက်ဆို မျက်နှာများတဲ့သူကြီး တစ်ယောက်တည်း ငိုင်တိုင်တိုင် ထိုင်နေတာကို မတွေ့ရတော့ဘူးဆိုတာ သေချာတွားပီပေါ့နော် ….
အခုတော့ ငိုင်တိုင်တိုင်မဟုတ်တော့ဘူး ဆတ်စလူး နတ်ပူးသွားပြီ နွယ်ပင်ရဲ့
​ဘေးတီး အ​ရောက်​ပို့ ဆွဲစိ​တွေက ဘယ်​သူ​တွေလည်​းလို့ ကြည်​့လိုက်​ရင်​ပဲ
ဒင်းက ကျုပ် ရဲ့ လုံမ ကို မ သွားတာပေါ့လေ။
အရီး မသိဘဲ လုံမ ကို ထိသွားတဲ့ မင်းသားတော့ တွေ့ရင် နားရွက်ဆွဲခံရပီမှတ်။
အောဝါဓ များ မကြာခင် လာမည်။
ဟီ ဟိ အရီးကတော့ ဒဲ့ဆော်ပြီ… ဟိုမောင်ရင်လေး ကြားလား…
ဆိုတော့ …. အမှန်ပေါ့။
နားထိုင်း၊ မျက်စိ မှုံ တော့ ဒဲ့ မမှန်းရင် တစ်လွဲဖြစ်တော့မှာ ကကျောက်ရေ။
ဒါတောင် သီသီလေးလွဲ တော့ မလို့။
“အရီး မသိဘဲ လုံမ ကို ထိသွားတဲ့ မင်းသားတော့ တွေ့ရင် နားရွက်ဆွဲခံရပီမှတ်။´´
အရီး မသိလိုက်တဲ့ မလုံတဲ့ ဘက်က လှည့်ခေါ်သွားတာနေမှာပေါ့ဗျ။
ကျန် လုံမ တွေ ကို ဘယ်လို ပိတ်ထားသင့်သလဲ စဉ်းစားရဦးမယ်။
အဓိက ဟို တစ်ကောင် တစ်ညောင်ညောင် နဲ့။
ဟောင်လွန်းတဲ့ ခွေး လူမလေး ဆိုလား။
အော်လွန်တဲ့ ကြောင် ကလဲ အသံဘဲ ရှိမှာပါလေ။
ဒီ သုံး စုံတွဲ လုံး တစ်ချိန်ထဲ.. တစ်နေရာထဲမှာ မင်ဂါဆောင်ခဲ့ရင်. ဘဝ တစ်သက်မှာ ဘယ်သူ့မင်ဂါဆောင်မှ မတက်ခဲ့တဲ့ မွန်ကစ်.. ဒါလင့်လက်ချိတ်ပြီး ပွဲတက် ပစ်လိုက်အုံးမယ်…
၃ စုံတွဲလုံး တစ်ချိန်ထဲ.. တစ်နေရာထဲကတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး မမွန်ကစ်ရယ်…
ကျောက်စ်ကတော့ အခုလာမည့် လွတ်လပ်ရေးနေ့…
ဟီဟိ… ဖိတ်စာပို့လိုက်မယ် ပွဲတက်မလား…
ကိုယ့်ရွာသား အချင်းချင်း အားပေးရတာပေါ့နော..
အနော့ရဲ့ မစွံနိုင်တဲ့ ကိုဂျီးတစ်ယောက်ကိုလည်း အပ်ပါရစေ။
အဲ့လူဂျီးက မစွံနိုင်တာမဟုတ်၊ မစွံချင်တာဆိုလားဘာလား…
ဘာများ မှားနေတယ်မသိ၊ ဂဇက်ပွဲမှာ အာဘွားပေးသူတွေလည်းရှိ ဆိုတော့…
ရွာထဲ မရောက်တာကြာနေတာ နဲ့ တော်တော် လည်သွားတယ်
နားလည်အောင် အိမ်ပေါက်စေ့ ပတ်လိုက်ရတယ်
ကာယကံရှင်တွေ အတွက် နည်းဗျူဟာမှူးတွေအတွက် ရွာအတွက် ဝမ်းသာဂုဏ်ယူပါ၏
Mon Kit ပြောသလို ရွာ့ အမှတ်တရ သုံးစုံတွဲလုံး တစ်နေရာထဲ တစ်ချိန်ထဲ ဆောင်ကြရင် ကောင်းမယ်
စုံတွဲ အားလုံး ရွှေလက်ခိုင်ခို်င် မြဲနိုင်ပါစေ ဆုတောင်းပေးပါတယ်
ကိုကျောက်ကြီး နီးရင် လက်တို့ ဦး နော
ဝါသနာ ဆိုတာက စွန့်ရ ခက်သဗျ
ဒီ လို ကောင်းတဲ့ ဝါသနာကိုတော့ မစွန့်ပါနဲ့ ဗျာ
ကိုရင်နိုရေ ဝါသနာဆိုတော့ စွန့်ဖို့ အခက်သားလား…
ဒါပေသည့် အော်မေ့ဂိုဏ်းနဲ့ သတ်ပုံဂိုဏ်းက ကြိမ်းနေကြတယ်…
စိတ်ချပါခင်ဗျ နီးရင်လက်တို့ ဖိတ်စာပို့လိုက်ပါ့မယ်…
ဥငေးကျောက်စ် တို့များ မိုက်ဒလယ်ကွာ …။
ကွန်မန့်ဒွေ အားဂျီးဘဲဟ …
ဒီကွန်မန့် အပါဆို ၁၀ဝ ဖြစ်ပီ။ (ဒါတောင် ဂျားထဲမှာ ဝင်ဂျင် ဝင်သွားအုံးမှာ)
ပဟေဠိ အဖြေဂဒေါ့ အတော် ပေါ်နေဘီဟ …
ဒါမယ့် .. နာ့မှာဒေါ့ သိပ်အ …
အင်းး ဖွဘုတ်ချက် ကနေ ဥငေးဆီ အင်တာ သွားဗူးအုံးမှ …
လုပ်ထားခြောက်ညက်နှာရေ လုပ်ထားဟ။ ညီးမှန်းဘီတူမှမသိဘူးဂိုး။
ခင်ဗျားလုပ်ပုံက မျက်နှာမမြင်ရင် ဘယ်သူမှသိတာမဟုတ်ဆိုပြီး…
မင်္ဂလာသတင်းလေးကို ဖတ်လိုက်ရတာ ပျော်စရာကောင်းလိုက်တာ….
ဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲဆိုပြီး စဉ်းစားလိုက်ရတာ အရီးလတ်ပြောမှဘဲ ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်သိတော့တယ်….
ခင်စရာကောင်းတဲ့ ရွာသားနဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ရွာသူ တို့အတွက် ဝမ်းသာဂုဏ်ယူပါတယ်လို့…..
အချစ်​မဟာဗျူဟာ ​လေ့လာ​ရေးအဖွဲ့ှမှ တပ်​မှူးကြီး ကစလို့အဖွဲ့ဝင်များအားလုံးရဲ့ကြိုးစားမှုကလည်း မသေးပါလားနော်… ဝမ်းသာစရာပါ….
အဟွတ်… လူထွင်ပါ၍ နွား ကျားကိုက်တာပါ မတင်တင်ရယ်…
မောင်ကျောက်စ်နဲ့ အဖွဲ့က ဗျူဟာထွင်ပြီး လှော်ပေးရုံသက်သက်ပါ ဟီဟိ…
အဲဒီဗျူဟာလေးလဲပိုစ့်တပုဒ်လောက် ကျောက်စ် လုပ်ပါအုံး ဗဟုသုတရတာပေါ့။
ဒီပို့စ် တစ်ခုတည်း ကွန်မန့် ရာချီနေတယ်
အမှတ်မမှားရင် ဟိုနှစ်ယောက်က တိတ်တိတ်ကလေး နေချင်ပါတယ် ပြောထားတယ်ထင့်
အခုတော့ ရပ်ကျော်ရွာကျော် ဖြစ်သွားပြီ
တိတ်တိတ်ကလေး နေလို့မရဘူး သဂျား…
သင်းတို့ကို ဒီလိုမချည်ရင် ထ “ဂေါက်”ကြမှာ…
အဲသလို ဂေါက်ရင် နာတို့ပဲ အုံးစားရဦးမှာ… ဟီ ဟိ
ပို့မည့်ပို့ ကုတို့ရောက်အောင်ပို့လိုက်မှ နားအေးမှာ… အား ဟိ
မနေ့ညက အိမ်ပြန်ရောက်ရောက်ခြင်း ဖော်ကောင်လုပ်လိုက်တာ
အပြေးအလွှားကို လာ မေးပါလေရော
ဒီနှစ်ယောက် မနက်ကတည်းက ဒီပို့စ်ကို စောင့်ကြည့်နေမှာ သေချာတယ် ဟီဟိ
ဒါ့ကြောင့် ဟိုတနေ့က ဖုန်းဆက်လာကြတယ်။
အန်တီ့နေရာသိရင် လာယူလေသမီး ဆိုတော့
အော် ဒို့ရွာသားတွေ ရွာထဲက နှမလေးတွေကို စောင့်ရှောက်ဖော်ရသားလို့ အထင်….
လက်သတ်စပ်တော့ အာတီဒုံ့ကို နားဖောက်ကြတာကိုး။
သာဒု သာဒု သာဒု …..
ခုကစပြီး ရွာစောင့်ဥပဒေ အချိန်မီထုတ်ပြန်မည်။
(၁)လက်ရှိရွာသူ အပျိုကြီး၊အပျိုလတ်၊အပျိုလေးများ အားလုံးသည် အော်မေ့ဂိုဏ်း၊သတ်ပုံဂိုဏ်း၊ရမ်းသန်းကွတ်ဂိုဏ်းဝင်များ အလိုလိုဖြစ်ပြီးဟု မှတ်ယူသည်။
(၂)ရွာသူများကို လိုချင်သော နှူးဘာများသည် အဆိုပါ ဂိုဏ်းကြီးများအား ရွာ့ရံပုံငွေအဖြစ် ဆက်ကြေးပေး/တင်တောင်း/ ရွေးယူမှသာ ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ ခွင့်ပြုမည်။
(၃) ရွေးယူရမည့် ဆက်ကြေးမှာ
ရွာသား မဟုတ်ပါက တစ်ဂိုဏ်းလျှင် ကျပ်ငါးသောင်း(သို့)အမေရိကန် ဒေါ်လှ ၅ဝ နှင့် ညီမျှသောငွေ၊
(သုံးဂိုဏ်းတွက် ကျပ် တစ်သိန်းငါးသောင်း သို့မဟုတ်အမေရိကန် ဒေါ်လှ ၁၅ဝ )
-ရွာသားဖြစ်ပါက တစ်ဝက် လျှော့ဈေးအဖြစ် ကျပ် ခုနစ်သောင်းငါးထောင် သို့မဟုတ် အမေရိကန်ဒေါ်လှ ၇၅ တိတိ
(၄)အဆိုပါ ဆက်ကြေးကို နှူးဘာသည် ကိုယ်တိုင် မပေးဆောင်နိုင်ပါက လော်ဘီလုပ်ကြသော ရွာ့ကာလသားကြီးများက စိုက်ဆောင်ပေးရမည်။
(မှတ်ချက်။ ။ရွာသားနှူးဘာများအတွက်သာ )
(၅)ရလာသော ဆက်ကြေးမှ တစ်ဝက်ကို ရွာသူားများ ဝါးတီး၍ ကျန်တစ်ဝက်ကို ရွာ့ကွန်ဖရင့်စ်တွက် သုံးမည်။
မှတ်ချက်…..အေတီဝမ်သည် အသက်ငယ်သေးသောကြောင့် ဂိုဏ်းမှ နှုတ်ထွက်နိုင်ဖွယ်ရှိသဖြင့် အရည်အချင်းရှိသော်လည်း ဂိုဏ်းချုပ်အဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းမပြုသေးပါဂျောင်း။
သတ်ပုံဂိုဏ်းသားချောလေး အတွက်ကျ ဘယ်လို စီစဉ်ပေးမလဲ ဒေါ်လေးရေ
သားတို့ကို လိုချင်တဲ့ ရွာသူလေးတွေကလဲ ခပ်များများ ဆိုတော့လေ
(သားတို့ကို လိုချင်တဲ့ ရွာသူလေးတွေကလဲ ခပ်များများ ဆိုတော့လေ)
နောက် ကျင်းပမယ့် ရွာ့ကွန်ဖရန့်မှာ ကံစမ်းမဲဖောက်ပေး။
ဒါမှ မရသေးဘူးဆိုရင် ခုနှစ်ပိုင်း ပိုင်းပြီး ခုနှစ်တိုင်း ဝေ လိုက်။
တိန်… တေပါဘီ ဂိုဏ်းချုပ်ကြီးတို့ရယ်…
ကိုယ်တိုင်က ဒေါ်လှ ၇၅…၊ မြှောက်ပေး ဒေါ်လှ ၇၅…၊ ပေါင်း ဒေါ်လှ ၁၅၀…
မရဘူး… ကိုရင်ဆာတို့ မိဇာဂျီးတို့ သဂျားတို့… မျှခံကျပါ… ဟီ ဟိ
တာမီး မပါ ပါ ဘူးးးး အာတီဒုံ။
တာမီးက ကိုယ့်မောင်လေး ဘယ်လိုတော်ကြောင်းး၊ စိတ်ထားကောင်းကြောင်းးးး၊ ကူညီတတ်ကြောင်းးးး နည်းနည်းလေးပဲ ပြောပြမိတာပါ။
စေခိုင်းသူ ဖေကျောက် နဲ့ ကူညီသူ ဦးဆာ တို့ကြားမှာ
လေးပစ်သူ အနော် မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး အာတီဒုံ။
အဲဒီ ဖြိုး ကို
ပင်လယ်နဲ့တူသော ယောက်ျားတစ်ယောက် ဆိုတဲ့ အလင်းဆက် ဆီ ပို့လိုက်ဗျို့
ဟိ – ဟိုတယ်မှာ CCTV အမြန်တတ်ခိုင်းမှ… ပြီးရင် ရွာထဲမှာ ပြန်ရောင်းစားမယ်။
ကျောက်စ်တို့ ဟန်းနီးမွန်းကို GMကြီး လက်ထဲ အပ်ထားရတာမို့…
မရက်စက်ပါနဲ့ဗျာ လို့… လို့… ဟီး ဟီး ဂယ်မလုပ်နဲ့နော်…